निर्मला हत्या प्रकरण र अधिकारको आन्दोलन
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले ‘नेपाली महिला आन्दोलन नसकिएको’ संकेत गर्यो । घरेलु हिंसाका मुद्दाबाट माथि उठेर नीति निर्माणतर्फ सोझिएको महिला आन्दोलनलाई निर्मला पन्त प्रकरणले झस्कायो ।
यो प्रकरणरले नीति, निर्माण र राजनीतिक तहमा मात्रै होइन, संविधानले सुनिश्चित गरेको न्यायिक अधिकारमा पनि महिलामाथि विभेद हुने नमिठो यथार्थ प्रस्तुत गरेको छ । न्यायिक पहुँचबाट महिला अझै टाढा रहेको पीडादायी सत्य उजागर गर्यो ।
लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि पहिलोपटक गाउँदेखि सहरसम्म, गोठदेखि, सिंहदरबारसम्म प्रभाव पार्यो ‘निर्मलाका निम्ति न्याय’ आन्दोलनले ।
यो आन्दोलनमा प्राण भरेकी थिईन् निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तले । मुस्किलले सामान्य पढलेख गर्न सक्ने दुर्गादेवीको न्यायचेतले महिला आन्दोलनलाई थप सशक्त बनायो ।
सत्ता र शक्तिको पहुँचबाट कोशौँ टाढा थिइन् दुर्गा । तर, पनि उनले सत्ताको केन्द्रमै प्रहार गरिन् ।
आर्थिक विपन्नताले पिरोलिरहेको जीवनमा दुर्गाले दैनिक सामना गर्नुपथ्र्यो सामाजिक विभेद । छोरा जन्माउन नसकेको आरोप खेप्नुपथ्र्यो ।
श्रीमानले छाडेकी महिलाको लाञ्छना लगाइरहने समाजसँग पनि दैनिक रस्साकस्सी गर्नुपथ्र्यो उनले । पीडाका पहाडसँग लड्दालड्दै दुर्गादेवी राज्यसँग लड्न पुगिन् । राज्यको राडारबाट बाहिर रहेको एक आममान्छे पनि कहिलेकाहीं सत्ताको लागि टाउको दुखाई बन्न सक्छ ।
सन् २०१५ मा बलिउडमा ‘दृश्यम’ नामको सिनेमा सार्वजनिक भएको थियो । सिनेमामा ४ कक्षा फेल भन्दै प्रहरीले एक पात्रलाई सामान्य रुपमा लिन्छ । आफ्नो परिवार त्यो पात्रले प्रहरीसँग संघर्ष गर्छ र विजयी हुन्छ । अतिसाधारण भनिएको मान्छेको शक्तिले राज्यसत्तालाई थरथर कपाउँन सक्छ भन्ने उदाहराण बनिन् दुर्गादेवी पन्त ।
लैंगिक, आर्थिक तथा क्षेत्रीय रुपले सीमान्तकृत अतिसाधारण मान्छेमाथि हुने अन्यायले पनि आन्दोलनको आँधी ल्याउन सक्छ भन्ने तथ्य उजागर भयो, निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा ।
राज्यको पहुँचबाट टाढा रहेको सुदूरपश्चिाका धेरैजसो घटना केन्द्रसम्म पुग्दैनन् । पुगिहाले पनि सत्ताले सुन्दैन । सुनिहाले पनि वास्ता गर्दैन् । तर, यसपटक भने सुदूरपश्चिमले मौनता तोड्दै निर्मला पन्त प्रकरणलाई देशव्यापी आन्दोलन बनायो ।
महिला हिंसाका घटनाको देशव्यापी मसालको रुपमा निर्मला पन्त प्रकरणलाई लिन बाध्य बनायो । निर्मला पन्तलाई देशभरका महिलामाथि हुने हिंसा र अन्यायको मसाल बनाइयो, बन्यो ।
‘बलात्कारी पक्राउ गर’ भन्दै आन्दोलित भएका नागरिकमाथि गोली गोली चलाउने सरकारलाई आमनागरिकको शक्ति देखाउन सुदूरपश्चिमले लिएको अग्रतामा हिमाल, पहाड र तराईले ऐक्यवद्धता जनाए ।
यो ऐक्यवद्धताले समाजमा महिलाले हिंसा खेप्नुपर्ने सत्य राज्यलाई बोध भएको हुनुपर्छ । समाज अझै समानता र न्याय खोजिरहेछ भन्ने यथार्थ राज्यले अझै बोध गरेन ।
सत्तासँग न्यायको अनवरत लडाई लडिन्ल/ड्दैछिन दुर्गादेवी पन्त । कञ्चनपुर हुँदै सत्ताको केन्द्र काठमाडौंका सडकसम्म न्यायको आन्दोलन चलाउने शक्ति देखाइन्, उनले ।
निर्मला हत्याको ठिक एक महिनापछि हामी कञ्चनपुर पुग्दा दुर्गादेवी शोकमा थिइन् । शोकमै भएपनि उनले न्यायिक लडाईंको हिम्मत हारेकी थिइनन् । भन्थिन्, ‘छोरीलाई न्याय नदिलाई त के मरौँला र ?’ शोकलाई शक्तिमा रुपान्तरण भनेको यहीं हुनुपर्छ ।
दुर्गादेवीको यो अदम्य सहासको फेर समाउँदै महिलाले राज्यमा आफ्नो अस्तित्व खोजे । समानता खोजे । अस्मिता रक्षासँगै न्यायिक अधिकारका लागि महिला अझै लड्दैछन् ।
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको एक वर्ष पुग्यो तर अपराधी अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन/पत्ता लगाइएको छैन । कञ्चनपुरबाट न्याय माग्दै दुर्गादेवी काठमाडौं आएपछि न्यायको माग गर्दै काठमाडौंका सडक तातिए ।
गत वर्ष भदौमा रिपोर्टस क्लबमा दुर्गादेवीले ‘कि त न्याय देउ, कि छातीमा गोली ठोक’ भन्दै सत्तालाई हत्या र न्यायमध्ये एक विकल्प छान्ने चुनौती दिईन् । निर्मलाका बुबा यज्ञराज पन्तले भक्कानिदै ‘म यो देशको नागरिक हुँ कि होइन ?’ भन्दै सत्तालाई संगीन प्रश्न गरेपछि आन्दोलन आममानिसबीच पुग्यो ।
वर्षौदेखि सत्ताको उत्पीडन खप्दै आएका महिलाको आन्दोलन बन्यो, निर्मलाका निम्ति न्याय । मूलधारबाट हेपिएका हरनागरिकको आन्दोलन बन्यो । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष शैलीमा बहिस्ष्करणमा परेका सबैको आन्दोलन बन्यो ।
निर्मलाका बुबाआमाले सत्तालाई गरेका संगीन प्रश्नले हामी बाँचिरहेको समाज र हामीमाथि शासन गरिरहेको सत्ताको क्रुर अवतार देखाउँछ । निर्मलाका बुबाआमाले सत्तालाई प्रश्न गरेको भिडियो हेर्दा आँखाबाट ‘आक्रोशका आँशु’ झर्छन् । निर्मलाका बुबाआमाका प्रश्न अझै यथावत् छन् ।
तर, सत्ता यस्ता कठोर प्रश्न सुन्नै चाहाँदैन ।
‘बलात्कारी पक्राउ गर’ भन्दै आन्दोलित भएका कञ्चनपुरबासीमाथि सत्ताको तातो बुलेट दागेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको अन्यायिक चरित्र उदांगो भयो । सत्ताको शासकीय उन्मादमा ओली सरकारले निर्दोष बालक शन्नि खुनाको ज्यान लियो ।
सत्तासँग ठोकिन पुगेको आन्दोलन
१० साउनमा साथीको घर गएकी निर्मला पन्तको शव पछिल्लो दिन ११ साउनमा उखुबारीमा भेटियो । शव भेटिएसँगै सुरु भयो घटना दबाउने प्रयास । घटना सामसुम पार्ने प्रयास गर्यो, प्रहरीले ।
सामन्य, अनपढ, गरिब र कमजोर महिलाका रुपमा लिएका थिए प्रहरीले दुर्गादेवीलाई । तर, प्रहरीको अनुमान गलत सावित भयो । प्रहरीको अनुमान विपरीत दुर्गादेवी न्यायका लागि सडकमा ओर्लिएपछि प्रहरीले बन्दुकको शक्ति देखाएर तर्साउने प्रयास गर्यो ।
पहिलो चरणको अनुसन्धानमा सामेल प्रहरी अधिकारी बर्खास्त गर्ने । अपराधीको शंकामा सयौँ मानिस समाउँदै केरकारको नाटक रचनामा लाग्यो प्रहरी । सत्ताको चाकरीमा लिप्त प्रहरीले नागरिक आवाज सुन्नै सकेन ।
आन्दोलन काठमाडौं सोझिएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले संसदमा उभिएर ‘पुँजीवादका कारण बलात्कार भएको’ हाँस्यास्पद अभिव्यक्ति दिए । निर्मला पन्तकी आमा दुर्गादेवी पन्तले काठमाडौंमा ‘कि त न्याय देऊ कि गोली हानेर मारिदेऊ’ भनेर चिच्याइरहँदा सत्तारुढ दलका अध्ययक्ष प्रचण्ड बलात्कारका घटनालाई सरकारविरुद्धको षड्यन्त्रको रुपमा अर्थ लगाउँदै थिए ।
३० भदौमा देशभर ‘निर्मलाका निम्ति न्याय’ माग्दै सडकमा ओर्लिएका जनतालाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सरकारको विरोधमा बोल्नेमाथि अरिंगालजस्तै जाइलाग्नु’ भन्दै कार्यकर्तालाई निर्देशित गरे ।
१३ असोजमा गुल्मी पुगेका गृहमन्त्रीले ‘अपराधी समाउन खोज्दा सरकार ढाल्ने खेल भइरहेको’ बताए ।
बादल, प्रचण्ड र ओलीका यी बोली राजनीतिक भाषण मात्रै थिए त ? पक्कै थिएनन्, सत्तासीन दलका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीबाट आएका यी अभिव्यक्तिले घटनामा शक्तिकेन्द्रले नै चासो देखाइरहेको संकेत गर्छन् । अनुसन्धान प्रभावित तुल्याउन शक्तिकेन्द्र नै लागि परेको हो कि ! भन्ने शंका पनि उब्जियो ।
प्रचण्ड, प्रधामन्त्री, गृहमन्त्रीको यस्ता अभिव्यक्तिले आन्दोलन झन् चर्कियो । सत्ताका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति सुनेपछि, राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट रहेका नागरिक थप आक्रोशित भए । आन्दोलित भए ।
निर्मला पन्तका लागि न्याय माग गर्दै गरिएका कुनै पनि आन्दोलन राजनीतिक उद्देश्य वा अभिप्रायले प्रेरीत थिएनन् । सामाजिक संजालमा लेखेकै भरमा नागरिक स्वतस्फुर्त आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आफूमाथि वर्षौदेखि भइरहेको विभेद र अन्यायको विरुद्ध सडकमा उत्रिएका हुन्, नागरिक ।
के बादलले भनेजस्तै सरकार ढाल्ने षडयन्त्र भएकै थियो ? वा प्रचण्डले भनेजस्तै बलात्कारका घटना बल्झाएर सकारमाथि षडयन्त्र भएका थिए ? प्रधानमन्त्री ओलीले भने जस्तै उनका कार्यकर्ता न्याय माग गर्नेमाथि अरिगांल जसरी जाई लाग्न गएकै हुन् ?
निर्मला प्रकरणमा केही रहस्यमयी घटना देखिन्छन् । छानविन समति सदस्य वीरेन्द्र केसीले राजीनामा दिनुले घटनालाई थप शंकास्पद बनायो ।
राजीनामा पत्रमा उनले ‘शक्तिशाली अपराधीबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई खतरा हुने । र, समितिको प्रतिवेदनले पनि न्याय नदिने’ उल्लेख गरेका थिए ।
छानबिनको औपचारिकता पूरा गर्न गठित समितिले सरकारलाई २१ असोजमा बुझाएको प्रतिवेदन आफैं शंकामा छ । सरकारले अहिलेसम्म सात वटा समिति गठन गरिसक्दा पनि निर्मलाको बलात्कारी हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
निर्मला पन्त प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको चासो अलिक धेरै नै देखियो । दुईतिहाई बहुमतसहितको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधामन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेको समयमा उतैबाट अपराधी पक्राउ गर्न १२ वर्ष लाग्ने बताए ।
ओलीको भनाईमा एक वर्ष थप्दै गृहमन्त्री बादलले ‘कयौं अपराधका घटनामा संलग्नहरु १३ वर्षपछि पनि कठघरामा आएका छन्’ भने ।
सरकारका यस्ता अनुत्तरदायी अभिव्यक्ति, प्रहरीको जालसाजी र नाटकले नागरिकमा धैर्यको बाँध फुट्यो । असन्तोषको सीमा नाघ्यो । त्यसपछि सडकमा उत्रिए, अधिकारकर्मी, न्यायप्रेमी, कलाकार, लेखक ।
तर, अपराधी अझै पत्ता लागेन । किनभने सरकारकै भाषामा भन्दा अपराधी समाउँदा सरकार ढल्ने खतरा छ । सत्ता र शक्तिशालीबाट आएका विभिन्न प्रलोभन, धम्की तथा राज्यको अनुदार, कठोर चरित्रकामाझ पनि निर्मलाकी आमा चट्टान झैँ उभिइन् । न्याय पाउने अधिकार माग्न उनले हरसंभव कदम चालिन् । उनकै पदचाप पच्छ्याउँदै सुस्ताइसकेको महिला आन्दोलन सडकमा आयो ।
समानता र नागरिक अधिकारका लागि वर्षौ जेल बसेको हुँ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यस्तै अनुदार र अन्यायी चरित्र देखाउन भनेर प्रधामन्त्री बनेका हुन् ? अपराधी पक्राउ गर्दा सत्ता गुमाउनुपर्ला कि भनेर ओलीले गरेको पिरलो गरेको देख्दा, हाँस्ने कि रुने ?
नागरिकले न्याय माग्दा सरकार गिराउने खेल भनियो । पुँजीवाद भनियो । जिन्दगीको आधा हिस्सा भारतमा मजदुरी गरेर बिताएका यज्ञराज पन्तले के बुझे होलान पुँजीवाद !
कञ्चनपुरसँग जोडिएको सीमावर्ती भारतीय सहर बनबासाबाट सय/पचासको सामान ल्याएर चटपट बेच्ने दुर्गादेवीले कसरी बुझिन् होला पुँजीवाद ?
सिमान्तकृत समुदायका धेरैजसो मानिस जीवनमा अन्यायको संकट आइलाग्दा कि आत्महत्याको बाटो रोज्छन् कि धेरथोर पैसामा चित्त बुझाउँछन् । तर, दुर्गादेवी यी सबैबाट माथि उठेर न्यायका लागि संघर्ष गर्न तम्सिइन् ।
राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा सधैं अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने महिलाका अधिकारको सवाल आउँदा सत्ता मौन बस्छ । निरंकुश रवैया अपनाउँछ ।
मधेस आन्दोलनको क्रममा नागरिकलाई ‘माखे साङलो’को उपमा दिने ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय सदस्यमा महिला राख्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदा महिला कार्यकर्तालाई ‘एनजिओको पछि लागेर ट्याउँट्याउँ नगर्न’ उर्दी जारी गरेका थिए ।
हरेक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनमा महिलाले पनि पुरुषसरह नै योगदान गरेका छन् । तर, तिनै आन्दोलनबाट शक्तिमा आएका राजनीतिक दल र तीनका नेता महिलाको मुद्दामा सहिष्णु देखिँदैनन् ।
व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा एक जुट भएर होमिएका महिला दलगत राजनीतिमा विभाजित भएको देखिन्छ । निर्मला पन्तका लागि न्याय माग गर्दै, नागरिक सडकमा चिच्याइरहँदा संसदमा सत्ता पक्ष र विपक्ष प्रष्टै छुटिएका थिए ।
यो राजनीतिक विभाजन अधिकारकर्मीमाझ पनि देखियो । निर्मलाका निम्ति न्याय भन्दै आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेका कतिपय अधिकारकर्मीमाथि विभिन्न आरोप पनि लगाइए ।
अधिकारर्मीबीच देखिएको मतभेदलाई राजनीतिक रंग दिइयो । राजनीतिक आस्थाका आधारमा फुट भयो/गरियो । र, यो विभाजनको फाइदा पनि सत्ताले नै उठायो ।
यी सबै हुँदा पनि दुर्गादेवीले भने हार मानिनन् । भदौमा काठमाडौंको आन्दोलन सकेर कञ्चनपुर गइसकेपछि उनले अनशन सुरु गरिन् । अनशनमै श्रीमान यज्ञराज पन्तको मानिसक अवस्थामा समस्या देखियो । न्याय माग्दा माग्दै श्रीमान बौलाहा बन्नुपर्ने अवस्था आउँदा पनि दुर्गादेवीले हिम्मत हारिनन् ।
छोरीको हत्या भएको पछिल्लो दिनदेखि दुर्गादेवी न्यायका लागि भौँतारिनु पर्यो । आन्दोलनमा उत्रिनु पर्यो । छोरीको हत्याको पीडामा उनले खुलेर रुन समेत पाइनन् । तारन्तार प्रहरीसमक्ष बयान दिनुपर्यो । मिडियासँग अन्तर्वार्ता दिनुपर्यो । दुई छोरीको स्याहार गर्नुपर्यो । तैपनि उनी न्यायको आफ्नो मागप्रति कटिबद्ध छिन् ।
दुर्गादेवि जस्तै न्याय र समानताप्रति कटिबद्ध सोच राखेर सम्पूर्ण अधिकारकर्मी र राजनीतिक दल लाग्ने हो भने भोलि फेरि अर्की निर्मला पन्तका लागि सडकमा उत्रिनुपर्ने थिएन कि ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ११, २०७६, ०९:४०:००
नेपालमा अंग्रेजी भाषा भित्र्याउने श्री ३ जंगबहादुर
राजनीतिक हस्तक्षेप हुञ्जेल विश्वविद्यालय सुध्रिँदैनन्
सागर चन्द @Sagarchand2933